Su'aalaha doorashada ee sannadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Su'aalaha doorashada ee sannadka
Publicerat onsdag 24 mars 2010 kl 11.15
Shaqadu waa doodda ugu muhiimsan ee doorashada foodda innagu soo heeysa ee bisha septeembar sannadkan 2010, sida ku tiro koob ey heeyadda Sifo u sameeysey idaacadda raadiyaha Iswiidhen.
Tirakoobkaa ayaa lagu ogaadey in 34% dadyoowgii su’aalahaa ka jawaabay iney muujiyeen in siyaasadda shaqadu tahey su’aal muhiim ah marka laga hadleyo tartanka ey xisbiyadu ugu jiraan doorashada sannadka ee foodda innagu soo heeysa.
Caalin ku takhasusay arrimmaha la xiriira doorashooyinka, Henrik Oscarsson kuna dhaqan magaalada Göteborg, ayaa qaba isagu fikirkaa, inkastoona ey doorashdii ka harsan tahey lix bilood.
- Xilliga ey doorashadu dhici doonto ayaa la filayaa in shaqa la’aantu gaarsiisnaato sagaal illaa iyo koow iyo toban boqolkii. Iyadoona sida uu sheegey Henrik Oscarsson, marka laga tallaabo qaado doorashooyinkii hore ey middaasina ku jirtey kaalinta koowaad.
Sida ku cad tirakoobkaa in xisbiga Mudaraat-ku yahey, midka siyaasaddiisa shaqada la xiriirta loogu aaminsan yahey, iyadoona 29% ee ka mid ah dadyoowgii su’aalaha la weeydiyey iney middaa qabaan, halka ey 20-tan boqolkii ee ka mid hina sheegeen iney taabacsan yihiin siyaasadda shaqada ee xisbiga Socialdemoqoraadka.
Marka laga yimaado shaqada, ayey su’aasha labaad ee bulshadu taabacsan tahey lagu caddeeyey tirakoobka siyaasadda xisbiyada ee dhanka caafimaadka.
Siyaasadda xisbiyada ee soo galootiga ayaa tirakoobkaa ka gashey kaalin hoose, iyadoona 3% ey caddeeyeen iney middaasi tahey su’aal muhiim ah. Halka ey dadyoowga da’doodu u dhaxeeyso 50-64 ey tiradaasi gaarsiisneeyd siddeed boqolkii.